नेपाली इन्जिनियरले बनाए वि द्युतीय मोटरसाइकल- ‘यात्री’, विदेश समेत नि र्यात गर्न सकिने ! « Dhankuta Khabar
नेपाली इन्जिनियरले बनाए वि द्युतीय मोटरसाइकल- ‘यात्री’, विदेश समेत नि र्यात गर्न सकिने !
प्रकाशित मिति : 20 December, 2019
काठमाडाैँ । नेपाली युवा इन्जिनियर टोलीले नेपालमै बनाएको विद्युतीय मोटर साइकल ‘यात्री’ सार्वजनिक भएको छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच उक्त मोटरसाइकल सार्वजनिक गरिएको हो। ४ जना इन्जिनियर सहि तको ७ जनाको टोलीले ‘यात्री डिजाइन स्टुडियो’को स्थापना गरी दुई वर्षसम्मकाे निरन्तर प्रयासमा उक्त सोटरसाइकल निर्माण गरेकाे हाे ।
बाइक निर्माणका लागि कम्पनीले २०१७ देखि रिर्सचको काम सुरु गरेकाे थियाे । यसका सम्पुर्ण स्पेयर पार्ट्स नेपालमै डिजाइन गरेर अमेरिका, चीन, भारत र युरोपेली मुलुकका विभिन्न कम्पनीसँग सहकार्य गरी निर्माण गरिएको कम्पनीका संस्थापक अशिम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । यो मोटरसाइकल नेपाली भूगोल र परिवेशमा बढी उपयोगी हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
३० किलोवाट ब्याट्री क्षमताको याे मोटरसाइकल सिङ्गल चार्जमा २ सय ३० किलोमिटर कुद्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ । यात्रा गर्दा हुने प्रमुख समस्या पहिचान गरेर त्यही अनुसार मोटरसाइकल निर्माण गरिएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयाे । उक्त मोटरसाइकल वाता वरणमैत्री र सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि बढी उपयोगी भएको कम्पनीकाे भनाइ छ । यसमा अरु मोटरसाइकलको जस्तो मेटल नभई कार्बन फाइबर प्रयोग गरिएकोले आकर्षक हुनुका साथै हलुका र सुरक्षित रहेको कम्पनीको दाबी छ ।
कम्पनीले यसको मूल्य सार्वजनिक नगरे पनि सकेसम्म थोरै मूल्यमा मोटरसाइकल उपलब्ध गराउने पाण्डेले बताउनु भयाे । ‘हाम्रो डिजाइन विदेशबाट बनाएर ल्याउँदा पनि भन्सार शुल्क लगायतमा खासै सहुलियत रहेनछ। यो नीतिगत समस्या सुल्झिएपछि हामी सके सम्म थोरै मूल्यमा मोटरसाइकल उपलब्ध गराउछौँ,’ उहाँले भन्नुभयाे । सरकारले यस्ता खालका नेपालमै निर्माण हुन सक्ने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेमा विदेश समेत निर्यात गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ ।
बे’पत्ता खोज्नका लागि स’शस्त्रको विपत् व्यवस्थापन टोली बाजुरामा
वर्षाले बेलैमा रोपाइँ, कृषक खुसी
धनकुटाको यो ठाऊँ जहाँ सित्तैमा टन्न आँप खान र सके…
आफन्तले मृ त्यु भएको भन्दै अस्पताल तो’डफोड गरेका बिरामी निको…
तीन महिनादेखि बन्द वैदेशिक रोजगारी खुल्यो, विदामा आएका
पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुँन ! - हेर्नुहोस् असार